Onye na-echebe di elu, Ngwaọrụ Nchebe, Nchedo Anya - Thor
Igwe ọkụ àmụmà bụ otu akụrụngwa nke usoro nchebe àmụmà. Ogwe àmụmà ahụ chọrọ ka e jikọọ ya na ụwa iji rụọ ọrụ nchebe ya.
Anyị na-elekwasị anya na mmepụta, R&D, imewe na ire ahịa nke SPDs.
Nye ọrụ OEM na ODM
Họrọ ma hazie SPD ahụ ziri ezi iji kpuchido akụrụngwa gị site na ịgbanye ọkụ.
Nkwalite ngwaahịa TRS-B ...
Nkwalite ngwaahịa TRS-C ...
Nkwalite ngwaahịa TRS-D ...
Nkwalite ngwaahịa TRS9 ...
Nkwalite ngwaahịa THOR ...
TRSS-DB9 Serial Port Signal Jikere Arrester Prot ...
Nkwalite ngwaahịa ...
Thor bụ ihe niile banyere ichebe nsogbu ndị na-emebi ike nke ike. Ọ bụ ebumnuche anyị na ebumnuche anyị ijikọ ịma aka ndị ahịa anyị na ogo dị mma, ọnụ ahịa ọnụahịa na ngwaahịa - nke ndị ahịa na-enweghị oke na nkwado teknụzụ mechara.
Edebere na 2006, Thor Electric Co., Ltd. emeela ihe niile iji nye ọtụtụ azịza na nchedo elu na nchedo oke na ngwaahịa.
Ngwọta maka ụlọ
Surges - a na-adịghị eleda ihe ize ndụ Surges bụ mgbe eleda anya n'ihe ize ndụ. Igwe ọkụ ndị a (transients) nke na - ewe nkewa nke abụọ na - akpata site na ọkụ ọkụ, dị nso na nke dịpụrụ adịpụ ma ọ bụ ịgbanwe ọrụ nke ịba uru. Direct na ọkụ dị nso na-abịa Direct ma ọ bụ dị nso ...
Agba nke anọ nke International Lightning Symposium
A ga-enwe Nzukọ Mba Nile nke Anọ na Nchedo Lightning na Shenzhen China October 25th ruo 26th. Nzukọ Mba Nile Maka Nchedo Lightning bụ nke mbụ na China. Ndị ọrụ nchedo ọkụ na China nwere ike ịbụ mpaghara. Itinye aka na klas nke ụwa ...
Anya na nchedo
Mmebi nke ọkụ eletrik na-ebugharị bụ otu n'ime isi ihe kpatara ngwa eletriki na-adịghị arụ ọrụ. site na otutu utoojoo ...